Porn Study - ကြည့်ရှုခြင်းကလုပ်ခြင်းသည်လုပ်ခြင်း - မလုပ်ခြင်းကိုရှင်းပြပါသလား။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
porn လေ့လာမှု: ပွုလုပျခွငျး-ဒါမှမဟုတ်မရှင်းပြပါကြည့်ရှုခြင်းပါသလား?
porn လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပွောငျးလဲ; ဒါကြောင့်အခြားအမှုအရာတို့ကိုပြုပါ
ဒတ်ခ်ျလေ့လာမှုအသစ် (ပွုလုပျခွငျးရှင်းပြပါကြည့်ရှုခြင်းပါသလား? ဒတ်ခ်ျပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်လူငယ်လူကြီးများတစ်အကြီးစားနမူနာများတွင်လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားတွင်အသင်းအကဲဖြတ်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းရှိလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီးအခြားအရာများလည်းပါ ၀ င်သည်။ အကယ်စင်စစ်ဒီတွေ့ရှိချက်, အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ထူးခြားတဲ့နှင့်ကျယ်ပြန့်လူသိရှင်ကြားမထိုက်တန်သည်။
သို့သော်ဆူညံခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်နှင့်ဆက်စပ်ကိုးကားမှာဟယ်အဆိုပါပေါ့ပေါ့စာဖတ်သူကိုလူတိုင်းလုံးဝစိတ်မဝင်စားအဖြစ်အင်တာနက်က porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများချွတ် shrug နှင့်ပဲတလျှောက်ရွှေ့သင့်ကြောင်းထင်မြင်ရရှိသွားတဲ့။ ဒါကဆက်ဆက် AVN မှာအယ်ဒီတာများ၏နိဂုံးခဲ့သည်® Media Network, Inc (“ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေမှုအားလုံးအတွက်အဓိကအရင်းအမြစ်”): လေ့လာမှုရလဒ်များဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူအပေါ် Porn ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအားမှေးမှိန်, အချိန်: လေ့လာဖို့: Porn လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ထိုသို့သောမကောင်းပါသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမကျမည်အကြောင်းနှင့် Huffpo: porn အသုံးပြုမှုဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုများဟာထင်ထားတာထက်လျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, လေ့လာ Says.
ခဲလေ့လာမှုစာရေးဆရာ Gert မာတင် Hald, ကိုပင်ဟေဂင်တက္ကသိုလ်မှာလက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်, opined:
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ဝံပုလွေကဲ့သို့ထင်မြင်သလိုကြီးမားပြီးဆိုးသည်မဟုတ်ပါ။ အခြားအကြောင်းအချက်များကိုလည်းအာရုံစိုက်သင့်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအချို့ကိုရှင်းပြသော်လည်း၎င်းသည်ကျိုးနွံမှုရှိသည်။
တကယ်တော့ porn is သင်၏စိုက်ထူမှုမဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းဖြစ်ပါက“ ကြီးမားပြီးမကောင်းသောဝံပုလွေ” (ခဏတစ်ဖြုတ်) ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ လေ့လာမှု၏အမှန်တကယ်ကောက်ချက်သည်ခေါင်းစဉ်မခံထိုက်ပေ။
"ဒီလေ့လာမှုကအရေးကြီးသောအခြားအချက်များအတွက်ထိန်းချုပ်သည့်အခါ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Explicit ပစ္စည်း (SEM) စားသုံးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ SEM စားသုံးမှုနှင့်လိင်ပြောင်းလဲမှုအကြားအခြားပြောင်းလဲမှုများကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်လာသောအသေးစားနှင့်အလယ်အလတ်ရှိသောအသင်းအဖွဲ့များသည် SEM သည်လူငယ်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အချက်တစ်ချက်မျှသာဖြစ်သည်။
အဝေးမှဖယ်ထုတ်ပစ်ခြင်း။ ။ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုသည်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူအချို့ကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသော်လည်းအခြားအချက်များလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်သည်ငယ်ရွယ်သောသုံးစွဲသူများ၏လိင်ဆက်ဆံမှု၊ ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု၊ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာဤတွေ့ရှိချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမှပြောစရာမလိုပါ များပြားလှအနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာ ငယ်ရွယ် porn အသုံးပြုသူများကိုဖော်ပြရန်ဒါမှမဟုတ် များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကို သူတို့ porn တွေကိုဖယ်ရှားသည့်အခါသူတို့သတင်းပို့ပါ။
ထိုကဲ့သို့သောဟို-hum တွေ့ရှိချက်ထိုကဲ့သို့သောအမိန့်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်သိမ်းသွင်း ထား. နိုင်ဘယ်လိုစပ်စု, ကျွန်တော်တစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုကျွန်တော်စပိုင်းတွင်ယူဆထက်ကအကြံပြုဖို့ပင်လျော့နည်းရှိပါတယ်။ သုတေသီအသိအမှတျပွုအဖြစ်ပထမ, လေ့လာမှု, ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအမျိုးသမီးတွေခဲ့ကြသည် 70% သောအွန်လိုင်းစေတနာ့ဝန်ထမ်း, (အဘယ်သူကိုသာ 5% တစ်ပတ်လျှင်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတစ်ချိန်က porn အသုံးပြုသော) အပေါ်မှီခို။
သုတေသီများသည်လိင်မှုကိစ္စပြုသူများကိုသာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ လေ့လာမှုကို“ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ” ကိုစစ်ဆေးနေစဉ်ကတည်းက၎င်းသည်ထင်ရှားသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစံနှုန်းတစ်ခုအဖြစ်ထင်ရနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ယနေ့လူငယ်များ (ယောက်ျား) ယောက်ျားများကတိုင်တန်းသော“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ” မှာဖြစ်သည် မတတ်စွမ်းခြင်း ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်
သူတို့ဟာအစစ်အမှန်မိတ်ဖက်ဖို့ဆွဲဆောင်မှုဆုံးရှုံးသတင်းပို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများ (ED, DE, မိတ်ဖက်နှင့်အတူ orgasm နိုင်ခြင်း), ထော့နဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်, စတာတွေမပေးလျှက်အထိမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်နှင့်အတူဤယောက်ျားတွေ၏အနည်းငယ်တောင်မှတစ်ခါတစ်ရံတွင်ညစ်ညမ်းအပေါ်သူတို့ရဲ့တိုးပွားလာမှီခိုမောင်းရသောအန္တရာယ်များလိင်မြားတှငျပါဝငျခွငျး၏ထို option, ရှိသည်။ တချို့ကနေဆဲသတို့သမီးကညာများနှင့်အကြောင်းကိုအလွန်အမင်းမပျော်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကလုံးဝဒီလေ့လာမှုကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ပါပြီလိမ့်မယ်။
တနည်းအားဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဟုဆိုကာအသံကျယ်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသာယာဝပြောရေးအများကြီးကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုချို့ယွင်းမဟုတ်ကြောင်းမိစ္ဆာစှဲဖန်တီးထားသည်။ သို့သော်လည်းသုတေသီတွေကအမှန်တကယ် quantified တစ်ခုတည်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေခဲ့ကြသည်:
လေးလံသောအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူအတော်များများက အဘယ်သူ၏ပုံပြင်များကျနော်တို့ကိုဖတ်ရှု အွန်လိုင်းမှအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအပြုအမူများအနက်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍“ ဟုတ်ကဲ့” ဟုပြောလိုသော်လည်း၎င်းတို့သည်ဂိမ်းမှမဟုတ်ပါ ပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများ porn ၏ overconsumption ဖုံးလွှမ်းနေတာကို။ ဤရွေ့ကားလက္ခဏာတွေတွေ့ရှိချက်များပါဝင်သည် porn အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုလွယ်ကူ အစစ်အမှန်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ပင်အပြည့်အဝ-စုံတဲ့လိုက်စားခြင်းထက်, စွဲ incapacitating ။
အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်မှုတ်သွင်း, ထုတ်ပြုမူကြဘူး။ သူတို့ကပေါ်လာမှာ ကျနော်တို့နောက်ကိုလိုက်သည့်ဖိုရမ်များ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေ့စဉ်လှုံ့ဆော်မှုတွေကသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုနှိုးဆွနိုင်စွမ်းပျောက်ကွယ်သွားတာနဲ့တူတယ်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့မြင့်တက် နှင့်အပြုအမူ "တကယ်တော့ငါမဟုတ်ဘူး“” ဒါမှမဟုတ်သူတို့ထွက်ခွာသွားဖို့အတွက်သူတို့မပါဝင်ချင်ကြဘူး။ ဤဖြစ်စဉ်နှင့်အညီလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရှာဖွေခြင်းသည်အန္တရာယ်များသောအပြုအမူများကိုမောင်းနှင်နေသည်ဟုလက်ရှိလေ့လာမှုမှသုတေသီများကမှတ်ချက်ချသည်။
ထွက်ပြုမူသောသူတို့အား porn-သွေးဆောင်ပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ပြောဆိုအသုံးပြုသူများတစ်အတော်လေးသေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ပိုများသောအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမှန်ကန်လိင်အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကသတင်းပို့သည်။
ဒီတော့ရောင်စဉ်တစ်ခုရဲ့အဆုံးမှာအသုံးပြုသူနဲ့အခြားတစ်ခြားမှာသဘာဝမကျတဲ့တားဆီးပိတ်ဆို့မှုရှိတဲ့သုံးစွဲသူတွေပိုများလာရင်တကယ်ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ Is ဒီနေ့ porn အချို့သောသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရပြီးအချို့လူများက ပို၍ အန္တရာယ်များသောအပြုအမူများကိုမောင်းနှင်နေခြင်းလား။ ဤအုပ်စုနှစ်စုသည်လေ့လာမှု၏ရလာဒ်များ၏ခေါင်းလောင်းကွေး၏ဆန့်ကျင်ဘက်အဆုံးတွင်ရှိသောကြောင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖယ်ထုတ်နေသလား။ သို့ဆိုလျှင်လေ့လာမှုသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ပုံပျက်ပုံကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
စကားမစပ်လေ့လာမှုအချက်အလက်များကို ၂၀၀၈ နှင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ကောက်ယူခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အချိန်ကာလကြာသောညစ်ညမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောလိင်လှုပ်ရှားမှုလောကတွင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ, Grindrအွန်လိုင်း-ကူညီပေါ့ပေါ့ချိတ်-ups များ၏ရှေ့ဆောင်သင်တန်းနည်းပြကသာ 2009 အတွက်တိုက်ရိုက်သွား၏။
အဲဒီအချိန်တုန်းကစမတ်ဖုန်း (နှင့်ညစ်ညမ်း access ကို) နေရာအနှံ့ကြဘူး။ မဟုတ်သလိုအသုံးပြုသူများကမကြာခဏဆိုသညျကားရာ porn ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ၏အသုံးပြုမှုကိုခဲ့သည် သူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုသိသိသာသာမြင့်တက်လာခဲ့။ ဤမကြာသေးမီကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု porn အသုံးပြုမှုနှင့် (အာရုံချို့ယွင်း) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားဆက်သွယ်မှုအပေါ်ရပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့အကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှားစေခြင်းငှါနေဆဲဖြစ်သည်။